‘पन्जापत्र लगाइदिएको सरकार गुलाम भइदियो’ - अन्तर्वार्ता - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
‘पन्जापत्र लगाइदिएको सरकार गुलाम भइदियो’
राजपा नेता राजेन्द्र महतो भन्छन्ः उपेन्द्र मुखिया, मेयरको ‘मलायी’ खान चुनावमा गए
मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा ल्याउन सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन २ असोजका लागि सार्‍यो। राजपा नेपाललार्इ चुनावमा सहभागी गराउनकै लागि भनेर सरकारले बाँकी १,५ र ७ नम्बर प्रदेशमा असार १४ मा हुने निर्वाचनका लागि तोकिएको मनोनयन दर्ताको समय पनि असार २ बाट असार ४ का लागि सार्‍यो।तर, राजपा नेपालले भने चुनाव बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा लागिरहने निर्णयमा पुगेको छ। किन बुझेन राजपाको चित्त? के भइदियो भने उनीहरु चुनावमा आउँछन्? राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग गरेको कुराकानी:
सरकारले राजपा नेपाललार्इ मनाउन भनेर प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचन असोज २ मा सार्‍यो। बाँकी १,५ र ७ मा हुने निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको समय पनि असार २ बाट सारेर ४ मा तोक्यो। अझै केमा असन्तुष्टि छ, आन्दोलनमा किन होमिनुभएको?
होइन, हाम्रा जुन आन्दोलनका माग थिए, सहमतिहरु भएका थिए त्यो काम पूरा भएन। खाली निर्वाचन-निर्वाचन भनेर त भएन। हाम्रा माग पूरा गरेरमात्रै निर्वाचन गर्छु भनेर आजभन्दा ११ महिनाअघि सम्झौता भएको थियो। जहिले पनि गर्छु, गर्छु भन्दाभन्दै कुनै पनि कामले पूर्णता पाएन। सहिद घोषणा भयो, घाइतेहरुले उपचार खर्च पाए। अझै पनि केही सहिद घोषणा गर्न बाँकी छ। कार्यकर्तामाथि लगाइएको झुठा मुद्दा होस् वा बन्दी रिहाइ होस् त्यो काम सरकारले गर्न सकेको छैन। साथीहरु जेलमा छन् अनि हामी कसरी चुनावमा जाने? रिहाइका लागि कार्यविधि बनाउने भनिएको थियो, तर कति वर्षे योजना हो कहिले बन्ने हो कार्यविधि? थाहा छैन।
संविधान संशोधनको कुरा त छोड्नुस्। दुई तिहाई पुगेन भन्दै सरकारले त्यसलाई टार्दै लग्यो। हामीले भन्दै आएको छौं ठूला तीन दल मिलेर संविधान जारी गर्नु भएको हो, तपाईहरु नै मिलेर संशोधन गर्नुस्। परिमार्जनमा सहमति भइसकेको छ। गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या जनसंख्याका आधारमा बढाउँछु भनेको खोई? त्यो पनि भएन। सरकारले आफूले गर्ने काम पनि गरेन। संशोधनको कुरा त दुई तिहाई पुगेन भनेर सरकारले भनिरहेको छ। तर, सरकारले गर्नसक्ने काम किन नगरेको? भनेपछि केही पनि नगर्ने खाली चुनाव गराउने, संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव गराउने। जुन संविधानमा हाम्रो आपत्ति छ, असहमति छ, त्यही संविधानलाई लागू गर्न हामीले भोट हालेर ‘मोहर’ लगाइदिनु पर्ने? सदर गरिदिनु पर्ने? यस्तो पनि हुन्छ। त्यसैले आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौं।
तपाईंहरुकै सहमतिमा सरकारले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गतेका लागि सारेको हो नि होइन र?
यो कुरा एकदमै गलत हो। सरकारले एकलौटी रुपमा २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको मिति सारेको हो। हाम्रो भनाइ के हो भने दुई नम्बर प्रदेशमात्रै मधेस हो? दुई नम्बर प्रदेशका जनतामात्रै लडेको हो? झापादेखि कञ्चपुरसम्म मधेसदेखि थरुहटसम्मका जनताले अधिकारका लागि लडेका थिए, मरेका थिए।
संविधान संशोधन होस् वा अरु राजनीतिक मुद्दा मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनता लडेका थिए। मधेसका थरुहटका जनताका सवाल थिएन नि उनीहरुको माग पूरा नगरी सरकारले चुनाव असार १४ गते गराउने? यो पनि हुन्छ? कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन। यो हामीले मान्दैनौ, त्यसकै लागि हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हौं।
तपार्इँहरुले नै सरकारसँगको वार्तामा २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्न प्रस्ताव गर्नु भएको हो भन्ने छ नि?
होइन, हामीले हाम्रो माग पूरा गरेर निर्वाचन गराउनुस् भनेका थियौं। हाम्रो आन्दोलन झापादेखि कञ्चनपुरसम्म थियो। मधेसमा मधेसको समस्या समाधान गरेर निर्वाचन गराउनु पर्छ भनेका थियौं। तर, त्यो कुरा मानिएन र प्रदेश नम्बर २ को चुनावमात्रै सारियो। सार्ने, नसार्नेसँग पनि सम्बन्ध थिएन। हाम्रो भनाइ यत्ति थियो कि मधेस थरुहट प्रदेशमा निर्वाचन आन्दोलनको एजेन्डा पूरा गरेपछि मात्रै गराऊ। त्यो चाहिँ सरकारले गराएन।
हेर्नुस् चुनाव सार्ने हाम्रो माग होइन। कहिल्यै पनि हामीले चुनाव सार्नुस् भनेर माग गरेका छैनौं। हामीले त हाम्रो माग पूरा गरेर चुनाव गराऊ भनेका हौं। जहिले माग पूरा हुन्छ, त्यसैबेला चुनाव गराउनु पर्छ भनेका हौं। चुनावको मिति सारेको सार्‍यै गर्ने तर, हाम्रा माग भने कहिल्यै पूरा नगर्ने। अनि के मतलब भयो हाम्रा लागि चुनाव सार्‍यौं भनेर? त्यसैले कुनै अर्थ नै छैन चुनावको मिति सारेर।
अहिले पनि असार १४ को चुनावका लागि मनोनयनको मिति दुई दिन सारेको छ। तर, यो बीचमा हाम्रा माग सम्बोधन गरेन भने निर्वाचनको मिति सारेर के काम भयो? पहिले वैशाख ३१ वाट जेठ ३१ मा सार्‍यो केही मतलब भएन। जेठ ३१ बाट फेरि असार १४ का लागि सार्‍यो, अनि माग पूरा नगरेपछि के मतलब भयो? त्यसैले चुनाव सार्ने हाम्रो माग होइन, समस्या समाधान गरेर चुनाव गराऊ त्यो हाम्रो माग हो। सरकारले जुन गर्नु पर्ने काम हो त्यो गरिरहेको छैन।
तपाईंहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने भनेरै सरकारले फास्ट ट्रयाकबाटै निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो। तर, तपाईहरु निर्वाचनमा जाँदैनौ भन्नुहुन्छ, आन्दोलनमा जाने भन्नुहुन्छ कसरी कुरा मिल्छ त?
निर्वाचनमा हामीले कसरी भाग लिने? हाम्रो लागि निर्वाचनमा जाने वातावरण नै सरकारले बनाइदिएन। निर्वाचनमा जाने ढोका नै बन्द गरियो। हामीलाई ढोका बन्द गरेर निर्वाचन गराइँदै छ, यसको परिणाम के के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन।
अघिल्लो सरकारले तपाईंहरुकै लागि भनेर २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो नि होइन? तर, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले नै रोकिदियो उचित छैन भनेर?
सरकारकै कारण सर्वोच्चले रोकेको हो। नियम कानून मिलाएर निर्णय गरेको भए त्यसलाई अदालतले रोक्ने थिएन। नियम कानून एउटा, निर्णय अर्कै तरिकाले गर्ने अनि रोक लगाउँदै न त? अदालतले रोकिदेओस् भन्ने मनसायका साथ सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो। स्थानीय तह नथप्ने मनसायका साथ गरेको हो। सरकारको नियतमै खोट छ।
यसको अर्थ असोज २ मा हुने निर्वाचनमा पनि तपाईंहरुले भाग नलिने हो?
हो, हाम्रा माग पूरा भएनन् भने हामी किन निर्वाचनमा सहभागी हुने? माग पूरा भएन भने यो असोज २ गते होइन, अर्को वर्षको असोज २ मा चुनाव गराएपनि हामीले भाग लिन्नौं। माग पूरा नगरे कसरी सहभागी हुने? आफ्नो मूल्य मान्यता र माग पूरा नभएपछि निर्वाचनमा नजाने भनिसकेपछि असार १४ गतेको निर्वाचनमा भाग लिने छैनौ भने असोज २ गते कसरी भाग लिइन्छ त? त्यो कल्पना पनि नगर्नुस्। सरकारको नियत ठिक छैन।
सरकारले बदनियतपूर्ण ढंगले २ नम्बर प्रदेशको मात्रै निर्वाचन रोकेको छ। जनताले बुझेका छन्, मेचीदेखि महाकालीसम्मका हाम्रा कार्यकर्ता र जनताले बुझिरहेका छन्। आफ्नो अधिकारका लागि सम्पूर्ण मधेस लडेको र सम्पूर्ण मधेसमा एकैपटक चुनाव हुनुपर्दैन। ताकत थियो भने सरकारले असार १४ मा सबै ठाउँमा निर्वाचन गराउनु पर्दैनथ्यो? हामीले त भाग नलिने चुनाव बिथोल्ने त भनेकै थियौं त। सरकारले हामीलाई फुटाउने प्रयास गरेको छ। हामी अब फुट्नेवाला छैनौं। फुटाएर मधेसमा शासन गर्छु भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ। मधेसमा यो कसैको चल्दैन।
असार १४ मा २ नम्बर प्रदेशबाहेकका प्रदेशमा निर्वाचन हुँदैछ। तपार्इँहरुले अब के गर्नुहुन्छ?
हामीले भनिसकेका छौं, आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा गरिसकेका छौं। असार १४ गतेसम्म निर्वाचनलाई बिथोल्नका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छौं। चुनाव बिथोल्न हामी आन्दोलनमा जान्छौं।
असार १४ मा तीन प्रदेशमा निर्वाचनपछि तपाईंहरुका माग सरकारले पूरा गर्‍यो भने २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्छ?
हामीले भन्दै आएका छौं, हाम्रा माग पूरा गर्नुस् हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं। हामी निर्वाचनको बाधक होइनौं। अहिले हामी आन्दोलनमा छौं। तर, संविधान संशोधन लगायतका हाम्रा माग पूरा भयो भने हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं।
संविधान संशोधन गर्ने विषयमा अघिल्लो सरकारसित तपाईहरुको तीन बुँदे सहमति भएको थियो। तर, देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा पनि त्यही सहमति भएको छ। देउवाले त चुनावपछि मात्रै संविधान संशोधनलगायत विषय टुंग्याउँछु भन्नुभएको थियो। भोट चाहिँ हाल्ने अनि, सरकारले सहमतिअनुसार काम गरेन भन्न मिल्छ?
होइन, हाम्रा माग पूरा गर्छौ भनेकै हुनाले प्रचण्डजीलाई हामीले समर्थन गरेका हौं। तीन बुँदे सहमतिअनुसार नै प्रचण्डजीले केही काम गर्नु भएको छ। विभिन्न आन्दोलनका बेला तराईमा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने काम भयो, केही बाँकी छन्। हाम्रा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन कार्यविधि बनेको छ। संविधान संशोधनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। २२ वटा स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा निर्णय गर्‍यो तर, त्यो रोकियो। यी केही काम त भएकै हुन्। तर, प्रचण्ड सरकारले गर्न नसकेका काम सरकारले गरोस् भनेर न हामीले देउवाजीलाई भोट हालेका हौं। हाम्रा माग सम्बोधन गर्न पूरा हुन बाँकी काम गर्छु भनेकाले देउवालाई भोट हालेका हौं। जसले काम गर्छु भन्छ त्यसलाई अवसर त दिनु पर्‍यो नि। तर, सहमति अनुसार देउवाजीले काम गर्नु भएन। त्यसैले हामी फेरि संघर्षमा आउन बाध्य भएका हौं।
सरकारलाई समर्थन पनि गर्ने अनि आन्दोलनमा पनि जान्छु भन्न सुहाउँछ र?
एकदम सुहाउँछ। सरकारलाई 'पन्जापत्र' लगाइदिएको 'गुलाम' भइदियो। सरकारलाई समर्थन काम गर्नलाई पो दिएको त। ‘नेग्लिजेन्स’ गर्न लाई होइन। हामीले समर्थन गर्‍यौ तर, काम भएन है भनेर हामीले घच्घच्याइरहेका छौं। त्यसैले समर्थनको मात्रै गुलामी हुँदैन। जसले दिन सक्छ त्यसले लिन पनि सक्छ। त्यसैले जसले समर्थन गर्छ त्यसले विरोध पनि गर्न सक्छ। अहिले त्यो भइराखेको छ।
तपाईंहरुले चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेपछि तपाईंहरुका कार्यकर्ता अरु पार्टीमा गएर उम्मेदवार बनेको, बन्दको विरोधमा उत्रिएको र चुनाव सारेको विरोधमा उत्रिएका घटना देखिएका छन् नि?
यो, मिडियामा आएका कुरा हुन्, यसमा सत्यता छैन। खसवादी मिडियामा यस्ता कुरा आइराखेका छन्। मधेसको जनता अधिकारका लागि लडेका छन्। अधिकारका लागि अहिले पनि लाखौं जनता सडकमा छन्। हाम्रा सारा कार्यकर्ता नै लडाइमा छन्। अधिकारका लागि मधेसीले ज्यान दिएको छ। भोलि पनि ज्यान दिन्छन्। यो भ्रममा कुनै पनि शासक वर्ग नपरे हुन्छ। मधेसीलाई मुखिया र मेयर भए पुगिहाल्यो भन्ने होइन। मधेसी अधिकारका लागि लडेको हो, त्यसको लागि अहिले पनि मर्न तयार छन्। हामी योपालि राम्रोसँग लड्छौं किन भने मधेस एक भएको छ यो पटक। मधेसवादी पार्टी एक भएका छन्। एक भएर राजपा नेपाल निर्माण भएको छ। मधेसी जनताको चाहना र भावना अनुसार एक भएको छ। र, मधेसी जनता पनि एक भएका छन्।
मधेसवादी दलकै नेताहरु उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदारले राजपा नेपाल चुनावमा नआएपनि निर्वाचन हुन्छ, डराउनु पर्दैन भनेका छन् नि?
निर्वाचन त सरकारले गराए कहिले रोकिन्छ र? निर्वाचन सरकारले गराउनै खोजेको भए २ नम्बर प्रदेशमा पनि गराउँथ्यो नि। मान्छेलाई मार्नुपथ्र्यो, गोली चलाएर, सेना पुलिस लगाएर निर्वाचन त गराउन सक्थ्यो। एउटा वार्डमा आज, अर्को वार्डमा भोलि गर्दै पञ्चवर्षीय योजना बनाएर निर्वाचन त गराउन सक्थ्यो नि त। त्यसैले उपेन्द्र यादवले बम बड्काएर, बन्दुक चलाएर भएपनि निर्वाचन गराउनु पर्छ भनेर भनेका छन्। यो कुरा मधेसी जनताले सुनेका छन्। अब मधेसी जनताले सोच्दै छन् उपेन्द्र यादवको दिमाग त ठिक छ भनेर। उपेन्द्रजीले एक त मधेसी एकतामा साथ दिएनन्, मधेसी एकतामा प्वाल पारेर मधेसलाई साथ दिएनन्।
अर्को कुरा, मधेसी जनता अधिकारका लागि सडकमा लडिरहेका छन्। उपेन्द्रजी चाहिँ चुनावमा गएका छन्, मुखिया र मेयर बन्न। त्यसको लागि मधेसीहरुले सहादत प्राप्त गरेका त होइनन्। उपेन्द्र यादवले आह्वान गरेका थिए नि, अधिकार दिलाउँछु, संविधानको पुर्नलेखन गर्छु भनेर। यसको लागि मधेसी जनतालाई लड्, मर भने। अहिले जनतालाई बाटोमै छोडेर गइदिए। जनता भन्छन्, हामीसँग गोली खान आऊ न, उनी भन्छन्–होइन हामी गोली खाँदैनौं, मुखिया र मेयरको ‘मलायी’ खान्छु। अहिले मधेसी जनता उनको विरोधमा छन्। उनले धोका दिएका छन्। उही जनता हुन्, मधेसको नेता बनाएर बढाएका थिए, अहिले उही जनताले उपेन्द्रलाई गद्दार भन्न थालेका छन्। उपेन्द्र यादवले अहिले केपी ओलीको काम गर्न थालेका छन्।
अन्तिममा, सरकारले के गर्‍यो भने तपाईंहरु निर्वाचनमा आउनुहुन्छ?
सरकारले हाम्रा माग पूरा गरिदिनु पर्‍यो, हामी भोलि नै चुनावमा आउँछौं।
प्रकाशित ३ असार २०७४, शनिबार | 2017-06-17 19:42:11